Ny vidin'ny angovo amin'ny fampandehanana motera elektrika mandritra ny folo taona dia farafahakeliny 30 heny amin'ny vidin'ny fividianana voalohany. Miaraka amin'ny fanjifana angovo tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny vidim-piainana manontolo, Marek Lukaszczyk mpamokatra motera sy mpamily, WEG, dia manazava fomba dimy hanatsarana ny fahombiazan'ny angovo maotera. Th ...
Ny kinova farany tamin'ny fandalinana ny tsena taona 2020 amin'ny Asynchronous Motor Market izay misy 103 miaraka amin'ireo takelaka data, Charts, Graphs, ary sary izay mora azo amin'ny fampisehoana fanadihadiana lalina. Ny Coremavirus Pandemie (COVID-19) dia nisy fiatraikany tamin'ny lafim-piainana rehetra manerantany. Ity misy le ...
Zhejiang Lijiu Motor Co., Ltd. (izay antsoina hoe "Zhejiang Lijiu Motor") dia miorina ao Taizhou, Zhejiang, ilay fonenan'ny toekarena tsy miankina. Miantehitra amin'ny faribolana ara-toekarena lehibe amin'ny Reniranon'i Yangtze Delta, ny tontolo jeografia dia ambony. Vao 2 ...